4 Echiche Productiongha Mmepụta Vidiyo na Ngwọta Ha | Martech Zone
Wenezde, August 21, 2013 Saturday, January 23, 2021 Douglas Karr
Anyị anọwo na-agba ndị ahịa anyị niile ume ka ha tinye vidiyo dị ka akụkụ nke usoro ịre ahịa n'ịntanetị. Ọtụtụ n'ime ndị ọbịa weebụ gị na-agbahapụ saịtị gị kpamkpam n'ihi na enweghị vidiyo.
Ndị ọzọ anaghị eme ya ebe ahụ n'ihi na vidio gị egosighi na nsonaazụ ọchụchọ vidiyo. Youtube na-aga n'ihu ịbụ njikwa ọchụchọ na-eduga Google… na ọ bụ ahịa na-eto eto.
Nke ahụ kwuru, enwere ọtụtụ nghọtahie gburugburu vidiyo n'ihe metụtara mgbagwoju anya ya na ụgwọ ya. N'okpuru bụ akụkọ ifo anọ zuru oke metụtara mmepụta vidiyo na otu esi eme ka ngwọta dị Netiwu SoMedia nwere ike inye aka:
All ọkachamara video mmepụta bụ ọnụ - Na ọdịnala, imepụta vidiyo nwere ike ịbụ ihe ruru $ 1,150 kwa elekere na karịa. SoMedia Network's Video scalable bụ ikpo okwu nke mejupụtara ndị na-ese vidio 3,000. Ikpo okwu na-enye ohere vidiyo azụmaahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ site na $ 450 na $ 1,499 dabere n'ogologo.
Ọkachamara ọkachamara vidiyo na-ewe oge - Iji gbaa, dezie ma mepụta vidiyo dị elu nke ejiri were izu ole na ole ruo ọnwa ole na ole dabere n'ogologo. SoMedia akọwapụtala usoro okike site na ịmepụta usoro njikwa n'ime igwe ojii nke igwe ojii ha. N'ihi ya, a na-arụ ọrụ vidio n'ime ụbọchị iri na anọ e kenyere ha ọrụ.
Chọta na ịnye ezigbo onye na-ese foto bụ oge na-ewe oge dị ukwuu n'ọrụ ahụ - Ruo ugbu a, iji onye na-ese vidio na-enweghị ndụmọdụ onwe onye dị mgbagwoju anya na mgbe ụfọdụ ọ nwere nnukwu ihe egwu. Taa, SoMedia enyochagoro ma were ihe kariri 3,400 ndi okacha amara nke ulo oru tinyere ndi isi, ndi mmeputa na ndi nlere vidiyo. Ndị ọkachamara a niile bụ ndị SoMedia nyochara iji hụ na ọrụ dị elu.
Mmepụta kwesịrị ime n'okpuru otu ụlọ, ọ bụrụ na a ga-eme ya nke ọma - backga njem azụ na-aga ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ ụzọ kachasị mma iji nyochaa usoro vidiyo na ịnakọta ngwaahịa emechara. Ọrụ igwe ojii SoMedia na-enye nnyefe dijitalụ n'ime ụbọchị 14 nke ụbọchị mmalite. E mepụtara ya dị oke mma ma dị n'ụdị ọ bụla, igwe ojii na-arụ ọrụ na-ama nke mmepụta vidiyo ọdịnala.
Ọ bụrụ kwadoro azụmahịa gị na ụfọdụ nnukwu vidiyo akụrụngwa, ụfọdụ dị ukwuu 3-isi ọkụ, ọ ga-amasị m ịdekọ ya n'onwe gị, enwere ụzọ ndị ọzọ. Nwere ike imekọrịta n'ime mepụta gị video na ngwaọrụ dị ka WeVideo or Animaker.
Tags: kantalupsomediantinye vidiyommepụta vidiyovideographer